नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) बीच पार्टी एकताकाे ऐतिहासिक सहमति - Left Review Online
पार्टी एकता प्रक्रिया
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइन २०७४ फागुन ७ गते सोमवार
काठमाडौं । देशका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच अामजनताले एकताकाे खबर सुन्न अातुर रहेकाे समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच पार्टी एकताको ऐतिहासिक समझदारी भएको छ ।
नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना र समाजवादको आधार तयार पार्ने महान उद्देश्यसहित गत असौज १७ गतेदेखि शुरु भएको एकता प्रक्रियामा आज फागुत ७ गते समझदारी जुटेको हो । यो बीचमा पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, नेतृत्व, संगठनात्मक एकीकरणको प्रक्रिया लगायतका विषयमा दर्जनौपटक दुबै दलबीच बिभिन्न तह र चरणमा छलफल सम्पन्न भएको थियो ।
दुबै दलले एकता प्रक्रियामा सहमति निर्माण गर्न दुबै अध्यक्ष रहने पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरेका थिए । आज बालुवाटारमा बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकल सात बुँदे समझदारी गरेको छ ।
ने.क.पा.(एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का बीचमा एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरु:
२) पार्टीको निर्देशक सिद्घान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद रहने छ ।
५. उपरोक्त आधारमा टेकेर अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन एवम् अन्तरिम विधान तयार पारी सोहीअनुसार एकीकृत पार्टी सञ्चालन गरिने छ ।
६. प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै समाजिक आर्थिक रुपान्तरण मार्फत् समाजवादका आधार निमार्ण गरिनेछ ।
पछिल्लाे - यो जनताकाे पक्षमा रक्तपातविहिन युद्ध हो – अध्यक्ष प्रचण्ड
अघिल्लाे - एनजिओ: साम्राज्यवादको सेवक